Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ)
Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) ကဘာလဲ။
Osteochondritis dissecans ဆိုသည်မှာ အရိုးနုနှင့် အောက်ခံ အရိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ ကွဲထွက်ပြီး ပြုတ်ထွက်နိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုကို ခေါ် ပါသည်။ တင်ပဆုံနှင့် ဒူး အဆစ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ခြေ ကျင်းဝတ်နှင့် တံတောင်ဆစ်တို့တွင်လည်း ထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ပါ သည်။
Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ငယ်ရွယ်သော (အသက် ၁၀-၂၀) နှင့် အလတ်ပိုင်း (အ သက် ၃၀-၆၀) လူများနှင့် အားကစားလုပ်သော လူများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများတွင် ပိုဖြစ်ပါသည်။
Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Osteochondritis dissecans ၏ရောဂါလက္ခဏာများ သည် ထိခိုက်သော အဆစ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ-
နာကျင်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အားကစားလုပ်ပြီးနောက် တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူတိုင်းတွင် မနာပါ။ နာကျင် ပါက မသဲမကွဲနာခြင်း၊ ဖြည်းညင်းစွာနာခြင်း၊ ကိုက်ခဲ ခြင်း၊ ပေါ်လိုက်ရပ်လိုက်နာခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်သော ကြောင့် ရောဂါအဖြေရှာရန် ခက်ခဲပါသည်။
လှုပ်ရှားစဉ်တွင် အပိုင်းအစတစ်ခု သည် ညပ်နေပါက အဆစ်များသည် ကွဲအက်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင် ဖြစ်ပါ သည်။
လှုပ်ရှားနိုင်မှု ပမာဏနည်းခြင်း။ Osteochondritis dissecans ဖြစ်သော လက်နှင့် ခြေထောက်ကို မဆန့် ထုတ်နိုင်တော့ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပါ။
အဆစ်ကို လှုပ်ရှားနိုင်သော ပမာဏအပြည့် လှုပ်ရှား ရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အဆစ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း။
ဒူး၊ တံတောင်ဆစ် သို့မဟုတ် အခြားအဆစ်တွင် ဆက်တိုက် နာကျင်မှု ဖြစ်ခြင်း
Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းသည် မရှင်းလင်းသော်လည်း Osteochondritis dissecans သည် အရိုးတွင် သွေးထောက် ပံ့မှု ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပုံပေါ်သည်။ ထိုသို့ ဆုံးရှုံးခြင်းသည် အရိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို သေစေသည်။ ထိခိုက်ခံရသော အရိုး၏ အပိုင်းသည် ပြိုကျပြီး အဆစ်မျက်နှာပြင်တွင် ချိုင့်ခွက် တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ထိုသေသော အရိုးပေါ်မှ အရိုးနုသည် လည်း ပျက်စီးသွားသည်။
သေသော အရိုးသည် ကျိုးသွားပြီး အဆစ်အတွင်းတွင် လွတ်နေသော ပစ္စည်းအဖြစ် ပေါလောပေါ် နေပါသည်။ ရောဂါသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ ခဏခဏ တစ်နေရာတည်းကို ထိခိုက်မိသူများတွင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အခြား အချက်များကို တံစဉ်ပုံ သွေးဆဲလ်များဖြစ်သော သွေး အားနည်းရောဂါ နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Osteochondritis dissecans ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက်များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ-
Osteochondritis dissecans သည် ကလေးငယ်များ နှင့် အသက် ၁၀-၂၀ ကြား အရွယ်ရောက်လူငယ် များတွင် အများဆုံး ဖြစ်ပွားပါသည်။
လိင်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဖြစ် နိုင်ချေပိုမြင့်ပါသည်။
ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊ ဦးတည်ချက်ပြောင်းခြင်း၊ အရှိန် တင် စသည်တို့နှင့် စပ်ဆိုင်သော အားကစားနည်းများ ကစားခြင်းသည် Osteochondritis dissecans ဖြစ် နိုင်ချေကို မြင့်စေပါသည်။
Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ယခု ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက် များမှာ ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေး ချက် များနေရာ တွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက် သိရှိလိုသော အချက်အလက် များအတွက် သင့်၏ ဆရာဝန် နှင့် အမြဲတိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။
Osteochondritis Dissecans ( အရိုးနုနှင့် အောက်ခံအရိုးတို့ အဆစ်မျက်နှာပြင် မှ အက်ကွဲပြုတ်ထွက်သော အခြေအနေ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Osteochondritis dissecans အတွက် ကုသမှု ရွေးချယ်ခြင်း တွေက ဘာလဲ။
အနားယူခြင်း၊ မလှုပ်ရှားဘဲနေခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးများသုံးခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ လေ့ ကျင့်ခန်း မလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုကို မြန်ဆန်စေ ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သောသူများတွင် ခွဲစိတ်ကုသ မှု လိုအပ်ခြင်းမှာ ရှားပါးပါသည်။ ကျောက်ပတ်တီး သိုင်းကြိုး ဖြင့် အဆစ်ကို ကာကွယ်ထားခြင်းသည် ပြဿနာမဖြစ်စေဘဲ အနာကို ပြန်လည်ကောင်းမွန် စေပါသည်။ နာကျင်ခြင်းသည် ဆိုးရွားလာပါက အဆစ်သည် လှုပ်မရတော့ပါက ကွေး၍ ဆန့် ၍မရတော့ပါက ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Osteochondritis dissecans အတွက် အသုံးအများဆုံး စစ် ဆေးမှုကို ဘာလဲ။
Osteochondritis dissecans ကိုအတည်ပြုရန် ပထမဦး စွာ ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးမှု ခံယူရပါမည်။ ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးမှု ပြု လုပ်နေစဉ်တွင် ဆရာဝန်သည် ထိခိုက်သော အဆစ်ကို ဖိကြည့်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း နာကျင်ခြင်းကို စစ်ဆေးပါသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း လှုပ်ရှားနိုင်သလား သိရှိရန် သင်အဆစ်အား ဦး တည်ချက်များစွာကို လှည့်ခိုင်းပါမည်။ ဆရာဝန်သည် ထိခိုက် သောနေရာဝန်းကျင်မှ အရွတ်ကဲ့သို့သော အရိုး၏ အစိတ် အပိုင်းများကို လည်း စစ်ဆေးပါမည်။
ထို့နောက် ဆရာဝန်သည် ရောဂါအဖြေရှာခြင်းကို အတည် ပြုရန် အောက်ပါစစ်ဆေးမှု အချို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ အဆစ်၏ အရိုးများတွင် ပုံမှန်မ ဟုတ်ခြင်းများကို ပြသနိုင်ပါသည်။
MRI ရိုက်ခြင်း။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတွင် ပုံမှန်ကဲ့သို့ ထင်ရပြီး သင့်တွင် ရောဂါလက္ခဏာများ ဆက်ရှိနေ ပါက ဆရာဝန်သည် MRI ရိုက်ရန် ညွှန်ကြားပါလိမ့် မည်။
CT scan ရိုက်ခြင်း။ အရိုးကို အသေးစိတ် မြင်နိုင်ပါ သည်။ အဆစ်အတွင်း လွတ်နေသော အပိုင်းအစများ ၏ တည်နေရာကို ထောက်ပြရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် Osteochondritis dissecans ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် Osteochondritis dissecans ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
လိုအပ်သလောက် အနားယူပါ။ မလှုပ်ရှားဘဲနေပါ။
ရောဂါလက္ခဏာများ နှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ချိန်းဆိုမှု များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ သောက် သုံးရန် ညွှန်ကြားမထားသော ဆေးများကို မသောက် ပါနှင့်။ ဆေးသောက်ချိန်ကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်။
Osteochondritis dissecans.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteochondritis-dissecans/basics/prevention/con-20024803. Accessed October 1, 2015.
Osteochondritis dissecans.http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/osteochondritis-dissecans.printerview.all.html. Accessed October 1, 2015.Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012.
Osteochondritis dissecans.http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/osteochondritis-dissecans.printerview.all.html. Accessed October 1, 2015.